सुन्दरीजल ब्यारेकमा किन सुन्दरी मात्रै ? -3ghumti
सुन्दरीजल ब्यारेकमा किन सुन्दरी मात्रै ?
फाल्गुण २७, २०७८ शुक्रवार २०:१० बजे
काठमाडौँ l सुन्दरीजल आर्सनल (विष्फोटक पदार्थ उत्पादन केन्द्र) का प्रमुख प्राविधिक महासेनानी रामचन्द्र साहले केटीहरुलाई मात्र काउन्सिलिङ दिने र संगीता माझीलाई क्वार्टरमा लाने काम किन गरिरहेका होलान् ? बिदामा रहँदा पनि उनलाई ड्युटी लिन नदिने, ड्युटी खटाउने व्यक्तिले ‘संगीता, आज ड्युटी बस्देऊ न’ भनी फोन गर्दा ‘म सक्दिन, पहिला कर्साबलाई सोध्नु, उहाँले बस भन्नुभयो भने बस्छु, नत्र बस्दिन भन्ने गरेको अवस्था छ ।
घरमा काम गर्न राखेको सिपाहीलाई स्केलको रासन पेटभरि नदिई अण्डा र मासु सुँघ्न पनि दिएनन् कर्साबले । भर्खरैसम्म नारायण शर्मा घरको ड्युटीमा थियो, आजित भएर ऊ बस्दिन भनी हिँड्यो । अहिले प्युठ आत्माराम कार्कीलाई राखेको छ ।
अगाडि सुवेदार मेजरको चलन नभए पनि इन्फेन्ट्रीको सुवेदारले चलाउने गर्थ्याे । हाल इन्फेन्ट्री सुवेदार धर्मबहादुर थापालाई फ्यामिली क्वार्टरबाट निकालेर दुई महिनाको निम्ति घर पठाइएको छ ।
आर्सनपतिद्वारा रनर राखिएकी संगीता माझी तीन चोटिसम्म प्राविधिक अमल्दारको परीक्षा लिँदा पनि पास भइनन् । दुई चोटिसम्म मिसन हापी आर्सनपतिको सेवा गरेबापत हाल नाम निकालेकी छन् ।
रनरलाई मोजा, पेन्टीसमेत धुन लगाई जबर्जस्ती सबै अंगहरुमा तेल लगाई मालिस गर्न लगाउने तराईका यिनै तेली साह कर्साब हुन् । गुल्मपति सेनानी हरिशरण बुढाथोक पनि तत्काल जुनियर अफिसरलाई कारवाही मात्र गर्न खोज्ने, धम्की दिने गर्छन् ।
केटी मान्छेलाई आफ्नो अफिसभित्र राख्नु त ठीकै हो, आर्सनपति निवासभित्रसमेत लगी राति ८ बजेसम्म राखिरहने के कारण थियो ? फस्र्ट मेन भनेको दिनै चेञ्ज गर्नुपर्ने हो तर हालसम्म केटी नै राखिरहनुपर्ने कुन नियम हो ?
केटी ८ र ९ जना भएतापनि त्यही एउटा संगीता माझीलाई किन रोजियो ? केटीहरुलाई काउन्सिलिङमा जाँदा कति जनासँग शारीरिक सम्बन्ध राखेकी छौ भनेर सोध्ने अधिकार यी कर्साबलाई कसले दियो ?
सुन्दरीजल कार्यालयमा करोडौं बजेट आउँछ तर जति आए पनि सुरक्षा गुल्मपतिलाई खबर नगरी सबै बजेट आफूमात्र लुटिरहेको देखिन्छ । प्रमाणका निम्ति केटी कर्साबको ब्यारेकमा छिरेको र सँगै निस्केको सबै भिडियो प्रमाण पठाएका छौं । – जेसिओहरू जनआश्था साप्ताहिकमा खबर छ l
# सुन्दरीजल ब्यारेक
# महासेनानी रामचन्द्र साह